EyeDwarha 15, 2018 admin
Ukuthembeka uqala abulawe zorhwebo kunye eluvalelweni cryptocurrencies
ukuthembeka Investments, edlulisela ngaphezu $7.2 zezigidi ngo-asethi client, wabhengeza inkampani entsha eyahlukileyo namhlanje kuthiwa ukuthembeka Asset Services Digital. Ingabinani baza kusebenza eluvalelweni cryptocurrencies ezifana Bitcoin, yaye uya kwenza imisebenzi kwi utshintshiselwano ezininzi kubatyali-mali ezifana mali ngothango neeofisi usapho.
Ezinye iinkampani crypto ziye wangenela iimveliso efanayo kodwa Emtshatweni nguye lowo uqeshwe yokuqala Wall Street ukubonelela ngokusesikweni izisombululo cryptocurrency ezifana eluvalelweni. "Injongo yethu kukuba ukwenza asethi oqhelekileyo uwuse kwi-lweenkobe, ezifana Bitcoin, lula ngakumbi bezimali "Emtshatweni Utyalo nguSihlalo kunye CEO Abigail Johnson uthi.
Bitcoin exchange Bitfinex yazisa izixhobo ezitsha ingxelo kubasebenzisi
Bitfinex isaziso ukuphehlelelwa wohambelwano entsha nezixhobo zokunika ingxelo, yenzelwe ukunceda abasebenzisi bafumane ulawulo enkulu phezu Programmes zabo, ze ubanike nolwazi luncedo ekwenzeni izinto zabo eqongeni. Toolkit entsha evumela abasebenzisi ukuba iqulunqe nangoko isishwankathelo inkcazelo akhawunti efunekayo ukuze babe endala akhawunti ngokwayo. Bitfinex uthe: "Thina unenkolo yokuba suite yethu yomsebenzi izixhobo ukuze kukhawuleziswe izinga wokwamkelwa lwehlabathi kunye noncedo lula urhwebo ngakumbi abaqolileyo."
Phantsi sikhokelo entsha ingxelo, abasebenzisi Bitfinex baya kukwazi ukusebenza nge-akhawunti zazo data kweintanethi, kunye nemisebenzi yabo irekhodwe kwiziko ledatha lendawo. Ukwengeza, yonke Toolkit ikwinkqubo ezitshintshelwa ngendlela isisombululo evulekileyo-umthombo leyo inika ithuba ukuqhelanisa izixhobo ukuba ilingane abasebenzisi ngabanye iimfuno nokungenisa iimpawu. Kuyaphawuleka, Bitfinex onika abasebenzisi ukuba bangenise iinkcukacha irhafu yaye sabelane ngolwazi yalo kunye norhulumente.
Crypto tracker app Blockfolio iphakamisa $ 11.5M
tracker portfolio Crypto Blockfolio uye waphakamisa $11.5 sezigidi round ingxowa ekhokelwa awuzali cryptocurrency-zijolise hedge fund Pantera Capital. Le nkampani lukhula kuthiwa ngaphaya phawu yokuphatha portfolio. Le nkampani ifuna ukuba zikhule zibe nendima umlamli-nxaxheba yeprojekthi. Le nto ikhululwe inomsebenzisi omtsha obizwa "uphawu," ngoMeyi, okuthiwa ivumela uhlaziyo cryptocurrency developers share ngokusebenzisa izaziso push kubalandeli zabo phezu app.
Blockfolio co-ngumseki kunye CEO Ed Moncada uthe: "Ukuba nje isicelo lokulandelela ixabiso-, wayeza kuba nako ukuphakamisa ukuba uhlobo imali thina. "Le app okwangoku imali, kwaye akazi izicwangciso ukuze uqalise izibhengezo. Moncada ubona le intshukumo njengendlela ukulondoloza intembeko abasebenzisi bayo, nokuba oko kuthetha kwemali engenayo ukulahlekelwa. Blockfolio, ukususela iqaliswa ngo 2014 siye sakhanga ngaphezu 4.5 abasebenzisi izigidi abasebenzisa inkonzo ukuze zihlale zisazi ulwazi kokutshintshiselana ezininzi, babe neso nemfuyo yabo, ukufumana uhlaziyo lwakutshanje developers project cryptocurrency.
Hong Kong Regulator – ban lilonke kwi Exchange crypto okungeyomfuneko
Usihlalo we Hong Kong i-izibambiso umlawuli - ngokungafaniyo China - zicime umlomo lilonke kwi Exchange cryptocurrency ekhaya, ecebisa imithetho ezisemthethweni kunokuba. Commission Securities and Futures Hong Kong xa kungoku nje ukuzoba izicwangciso ukuze alawule eli candelo.
USihlalo uCarlson Tong Ka-shing wathi: "Asazi ukuba ubekele umlomo iyonke kwi la maqonga imfuneko nenqubo eyiyo. Enoba ukuvimbela kubo, Iintengiselwano kusengenziwa lula kuqhutywa nge amaqonga iimakethi zaphesheya "
Ingxelo Daily Market Kraken for 14.10.2018
$30.7M wasebenza kuzo zonke iimarike namhlanje